Madaxweynaha cusub ee DDSI Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) [Sawir hore]
JIGJIGA - Mustafa Maxamed Cumar [Cagjar], Madaxwaynaha cusub ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya oo wareysi siiyay VOA-da ayaa ka hadlay bedalitaanka magaca iyo calanka degaanka, isaga oo tibaaxay inuu yahay go'aan ka yimid shacabka.
"Waxaan dooneynaa inaan sameyno waxay rabaan shacabkeena. Calanka iyo Magaca degaanka waxaa lagu soo celinayaa siduu horey u ahaa. Inaan Soomaali nahay cid uu shaki uga jiro ma lahan, waana ku faaneynaa magaca iyo calankeena," ayuu yiri Mustafa.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, Mustafa ayaa dul istaagey qodobada ugu waa wayn ee uu diiradda saari doono mudada uu xafiiska joogo, isaga oo carabka ku dhuftay meelo dhowr ah oo uu aaminsan yahay inay ubaahan yihiin wax ka qabasho.
"Qodobada ugu muhiimsan ee aan wax ka qaban doono waxay tahay; arrimaha bani'aadanimada oo degaanka dhibaato culus ay ka jirto; inaan mideeyo Beelaha Soomaaliyeed, oo dhinac la dul-min jiray iyo inaan xoojino siyaasada loo dhan yahay," ayuu Mustafa.
Arrimaha Bani'aadanimada ayuu tilmaamay in 27-kii sano ee lasoo dhaafay ay ahayd mid lagu tumanayay, Beelaha ayuu sheegay in loo kala eexanayay, wuxuuna balanqaaday Mustafa in maamulkiisa cusub uu wax badan ka qaban doono arrimahan.
"Dadka waxaa loola dhaqmayay sanadihii u dambeeyay sida Xaywaanka, waxaan ka shaqaynaynaa in dadku dhulkooda ugu nooolaadaan si xor ah, oo aysan jirin wax cabsi ah. Beelaha degaanka ma jiri doonto cid lagu xad-gudbo," ayuu yiri Mustafa.
Madaxwaynaha degaanka Soomaalida ayaa wuxuu afka ku balaariyay inuu ka shaqayn doono maamulkiisa sidii loosoo afjari lahaa colaadaha gaamurtay ee dhextaala Soomaalida iyo Oromada, taasoo ay ku naf-waayeen Boqolaal qof oo Rayid ubadan.
"Waan ognahay inay jiri doonan xubnaha nagu khilaafi doona waxaan wadno. Waxaan isku diyaarinaynaa sidaan ula tacaamuli lahayn. Waana ogol nahay in nala dhaliilo, diyaarna waan unahay," ayuu ku nuux-nuux saday Madaxwayne Mustafa.
Cagjar, oo isbuucii lasoo dhaafay loo xushay xilkaan ayaa wuxuu awooda sii hayn doonaa illaa 2020-ka, oo degaanku ka dhici doonto doorasho lagu dooranayo Madaxweyne rasmi ah ah.